‘Din Pa Ye Sen Ahonyade Pii’ (Mmebusɛm 22:1)
Sɛ obi wɔ din pa a, ɛma nkurɔfo nya ne mu awerɛhyem na wobu no
DIN pa ho hia paa. Aman bi so no, ɛho hia araa ma wɔwɔ mmara a wɔde bɔ din pa a obi wɔ ho ban. Nea wɔyɛ de bɔ din pa a obi wɔ ho ban no, ebi ne sɛ mmara wɔ hɔ a etia ntwatoso (asɛm a wɔkyerɛw anaa wotintim de sɛe obi din) ne ntwiri (asɛm a wɔka de sɛe obi din). Wei ma yɛkae tete asɛm yi: “Din pa na ɛsɛ sɛ wɔpaw, na ɛnyɛ ahonyade pii; anuonyam ye sen dwetɛ ne sika mpo.” (Mmebusɛm 22:1) Yɛbɛyɛ dɛn anya din pa ne obu afi afoforo hɔ? Ɛho afotu pa bebree wɔ Bible mu.
Ma yɛnhwɛ ɛho nhwɛso wɔ Dwom 15. Ɛhɔ no, odwontofo no bisaa sɛ: “Hena na ɔbɛsoɛ [Onyankopɔn] ntamadan mu?” Ɔmaa ho mmuae sɛ: ‘Nea ɔyɛ adetrenee, na ɔka nokwasɛm ne komam. Ɔnsɛe nkurɔfo din. Ɔnyɛ ne yɔnko bɔne, na ne mfɛfo nso, ɔmmɔ wɔn ahohora. Ommu onipa huhuni hwee n’ani so. Sɛ ɔka ntam na etia no mpo a, ɔnsesa n’ano. Na onnye adanmude.’ (Dwom 15:1-5) Sɛ wuhu sɛ obi de Bible mu afotu pa yi rebɔ ne bra a, woremmu no anaa?
Ahobrɛase nso yɛ su foforo a ɛma obi nya obu. Mmebusɛm 15:33 ka sɛ: “Ahobrɛase di anuonyam anim.” Susuw wei ho hwɛ: Sɛ obi wɔ ahobrɛase a, ohu baabi a ɛsɛ sɛ ɔyɛ nsakrae, na ɔyere ne ho yɛ ho adwuma. Afei sɛ ɔfom obi a, ɛnyɛ den mma no sɛ ɔbɛpa kyɛw. (Yakobo 3:2) Nanso sɛ obi yɛ ahantan a ɔnyɛ saa. Mmom ɛnkyɛ na ne bo afuw. Mmebusɛm 16:18 ka sɛ: “Ahantan di ɔsɛe anim, na ahomaso honhom di asehwe anim.”
Nanso sɛ obi sɛe din pa a wowɔ no nso ɛ? Ɛsɛ sɛ wofa abufuw na wopere wo ho yɛ ade anaa? Bisa wo ho sɛ: ‘Sɛ meyɛ sɛ mɛma nkurɔfo ahu sɛ asɛm no nyɛ nokware a, ɛno mmom remma mentrɛw atosɛm no mu anaa?’ Ɛwom ɛtɔ mmere bi a, sɛ wode obi fa mmara kwan so a, ɛboa. Nanso Bible ma yɛn afotu a nyansa wom sɛ: “Mpere wo ho nkɔtwe manso.” Mmom, “asɛm a ɛwɔ wo ne wo yɔnko ntam” no, wo ne no nkɔka. (Mmebusɛm 25:8, 9) * Wode ntoboase di ho dwuma saa a, ɛremma wommɔ ka nkɔtwe manso wɔ mmara kwan so.
Bible nyɛ nyamesom nhoma kɛkɛ. Ɛsan yɛ nhoma a ɛkyerɛ yɛn kwan wɔ abrabɔ mu, na yebetumi de yɛn ho ato so. Emu afotusɛm no, nyansa wom. Sɛ obi de yɛ adwuma a, ɛma onya su ahorow a ɛbɛma afoforo abu no na wanya din pa.
^ nky. 5 Yɛhwɛ Mateo 5:23, 24; 18:15-17 a, yebenya Bible afotusɛm pii a ɛbɛma yɛahu sɛnea yebesiesie yɛne afoforo ntam akasakasa.
Dɛn paa na ɛwɔ Bible ho a ɛmaa nkurɔfo de wɔn nkwa bɔɔ afɔre sɛ wɔn ankasa benya bi akenkan?